LONDON(P-TIMES)- Kumanaan muhaajiriin ah oo ku sugan dalka Turkey ayaa u dhaqaaqay dhanka xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalalka Greece iyo Bulgaria, iyaga oo ku wajahan Qaarada Yurub.
Arintan ayaa ka dambaysay kadib markii sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda Ankara uu sheegay inaysan hada kadib u hogaansami doonin heshiiskii ay sanadii 2016 la saxiixdeen Midowga Yurub ee lagu joojinayo muhaajiriinta u socdaalaya Yurub.
Sarkaal ayaa u sheegay Reuters in booliska iyo saraakiisha ilaada xuduudaha lagu amray inay ka hor wareegaan qaxootiga doonaya in dhulka iyo badda ay uga talaabaan Yurub.
Turkey ayaa Khamiistii sheegtay in 33 askari looga dilay duqeyn ay ciidamada dowladda Syria ka fuliyeen gobolka Idlib, waxaana dagaalka Idlib uu horseeday in qaxooti badan oo Syrian ah ay u soo cararaan dhanka Turkey.
Turkey ayaa waxay hada marti gelisaa 3.7 milyan oo qaxooti Syrian ah waxayna sheegtay inaysan xamili karin intaas ka badan. Culeyska mart-gelinta qaxootiga “waa mid aad ugu culus inuu hal dal xambaaro,” ayuu yiri sarkaalka Turkish-ka ah.